२ Father वाक्यांश फादर्स डेका लागि स्वयं सहायता संसाधन
२ Father वाक्यांश फादर्स डेको लागि
मारिया जोस रोल्डन | | वाक्यांशहरू
एउटै आमा भएको एउटै मात्र बुबा पनि छ। जब फादर्स डे नजिक आईपुग्छ, यो सामान्य हो कि तपाईं यो तपाईंको लागि विशेष होस् भन्ने चाहनुहुन्छ र यदि तपाईं उहाँसँग नजिक हुनको लागि भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईं उसलाई यो विशेष दिनमा त्यो स्नेह दिन चाहनुहुन्छ। यो प्रेम देखाउने धेरै तरिकाहरू छन्, र शब्दहरू मार्फत यो ती मध्ये एक हो। त्यसो भए पिता दिवस को लागी यी वाक्यांशहरु को याद छैन।
तपाईं ती वाक्यांशहरू छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईं आफ्नो बुबासँग राम्रो सम्बन्ध गाँस्नुहुन्छ र यो तरिकाले जब तपाईं यसलाई समर्पण गर्नुहुन्छ, उसले तपाईंलाई आफूले समर्पण गरेको शब्दहरू र तपाईंसँगको सम्बन्धको साथ चिनिन्छ।
कसरी वाक्यांश समर्पित गर्ने
यस प्रकारको वाक्यांश उहाँलाई समर्पण गर्ने धेरै तरिकाहरू छन् ताकि यो मुटुसम्म पुगोस्। यो सार्वजनिक बोल्ने को लागी उसलाई विशेष ती शब्दहरु सुनाएर। तपाईं उसलाई सन्देश पनि पठाउन सक्नुहुनेछ एक राम्रो छवि संग। अर्को विचार फादर डेको लागि एक राम्रो कार्डमा नोट लेख्नु हो।
यी प्रकारका वाक्यांशहरू तपाईंको बुबालाई समर्पण गर्दा तपाईंलाई केही शर्म लाग्न सक्छ, तर यदि तपाईं हामीलाई केही सल्लाह दिन दिनुहुन्छ भने ... त्यो लाजलाई अलग राख्नुहोस्। हामीसँग एक मात्र जीवन छ र तपाईंको बुबा, प्रकृतिको कानून अनुसार यस ग्रहलाई तपाईं अघि छोड्नुहुनेछ। तपाईसँग सँधै उसलाई तपाईको छेउमा हुँदैन।
त्यसकारण कुनै पनि अवसरले उसलाई के तपाइँ उसलाई माया गर्नुहुन्छ भन्न र तपाइँलाई कत्ति गर्व छ कि उहाँ यस जीवनमा र उहाँ गर्नुहुने र तपाइँको लागि गर्नुहुने सबै कुराको बुबा हुनुहुन्छ भनेर देखाउनको लागि देखाउनुहुन्छ, तपाइँले यो गर्नु आवश्यक छ।
घमण्ड, असन्तोष, वा अन्य विषाक्त मनसायले तपाईंको सम्बन्ध बिगार्न नदिनुहोस्। आफैलाई किन यो प्रश्न सोध्नुहोस्: यदि तपाई भोली मर्नु पर्ने हो, के आज रीस हुनु उचित छ? पक्कै होईन, र यस कारणका लागि यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाई आफ्नो बुबासँगको सम्बन्धको ख्याल गर्नुहुन्छ।
तपाईको सम्बन्ध सुधार्नको लागि सक्रिय श्रवण अभ्यास
यो एकै समयमा महत्त्वपूर्ण छ, जुन तपाईले हरेक बर्षको सम्बन्धको ख्याल राख्नु हुन्छ! जबकि फादर्स डे मनाउने दिन हो, एक बुबा वर्षको हरेक दिन हो। त्यसोभए आफ्नो जीवनको हरेक दिन तपाईंको सम्बन्धको ख्याल राख्न नबिर्सनुहोस्।
वाक्यांशहरू तपाईं पिताको दिन मा समर्पित गर्न सक्नुहुन्छ
त्यसो भए अब बढि समय बर्बाद नगर्नुहोस्, र हामीले खाली तपाईंको लागि तयार गरेका सबै वाक्यांशहरू पढ्नुहोस्। एक वा बढी छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई मनपर्दछ र तपाईं कसरी त्यसलाई आफ्नो बुबामा समर्पण गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोच्नुहोस्। तपाईले देख्नुहुनेछ कि उसको आँखाहरू खुशी देखि परिपूर्ण हुनेछ जब तपाईंले उसको सुन्दर र ईमान्दार वचनहरू देख्नुहुनेछ जुन तपाईं उसलाई समर्पण गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाईं एक छाल लायक हुनुहुन्छ! किनकि तपाईं राम्रा अभिभावक हुनुहुन्छ!
शुभ दिन बुबा! तिमीलाई थाहा छ? तपाईं मेरो बुबा हुनको लागि धेरै भाग्यशाली हुनुहुन्छ किनकि… मँ जस्तो गरी कसैले पनि तपाईंलाई माया गर्दैन!
जब कुनै व्यक्तिले थाहा पाउँदछ कि उसको बुबा ठीक छ, तब उसको आफ्नै छोरा छ जसलाई उसको बुबा गलत छ भन्ने लाग्छ।
मेरो जीवनको मानिस लाई बधाई छ जो, कुनै श without्का बिना, सधैं सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबै भन्दा राम्रो हुनेछ ... मेरा पिता।
जीवन एक निर्देशन पुस्तिकाको साथ आउँदैन, तर आशा छ मेरो बुबा एक अद्भुत पिताको साथ आयो ... अनन्त धन्यबाद मेरा पिता!
एक बुबा एक त्यस्तो मान्छे हो जसले आफ्ना बच्चाहरू आफूले चाहेजस्तो राम्रो भएको आशा गर्दछ।
बुबा, मसँग मेरो जीवनको सबै भन्दा राम्रो पलहरू साझा गर्न को लागी धन्यवाद। तपाईं संसारमा सबै भन्दा राम्रो बुबा हो! म पापालाई माया गर्छु। पिता दिवसको शुभकामना!
राम्रो बुबा, म तिमीलाई धेरै माया गर्छु!
तपाईंले मलाई बाइक चलाउन सिकाउनुभयो, तपाईंले मेरो होमवर्कको साथ सहयोग गर्नुभयो, तपाईंले मेरो घाउको उपचार गर्नुभयो ... तपाईं मलाई कारको बिल पनि तिर्न चाहनुहुन्न, हैन? अहिलेको लागि म तपाईको शर्तको प्रेम दिईरहेछु। बधाई छ, बुबा!
जीवन दिने जीवन एक बुबा होइन, त्यो पनि सजिलो हुनेछ, एक बुबा हो जसले प्रेम दिन्छ।
जब नवजात शिशु आफ्नो बुबाको औंठी पहिलो पटक आफ्नो सानो मुट्ठीले निचोल्छ, ऊ सधैंभरि फन्दामा पर्छ।
मेरो बुबाले मलाई सिकाउनुभयो कि राम्रो काम गर्न सक्ने एक मात्र तरिका अभ्यास गर्नु र त्यसपछि बढी अभ्यास गर्नु हो।
एक सय शिक्षक सहित एक स्कूल भन्दा एक राम्रो बुबा लायक मूल्यवान छ।
धन्यबाद बाबा मलाई कसरी बाँच्ने भनेर बताउनुभएन। तपाईं बस्नुभयो र तपाईंको उदाहरणबाट मलाई सिकाउनुभयो।
नायक को परिभाषा भन्छ कि ऊ एक हो जो एक असाधारण र उदार साहस को प्रदर्शन गर्दछ जसमा अरूको सुरक्षा र सेवा गर्नको लागि आफैलाई जानाजानी बलिदान समावेश छ। आज जस्तो एक दिन मँ तपाईंलाई केहि भन्नु छ बुबा: तपाईलाई मेरो नायक दिनहुँ धन्यवाद छ!
जब म जन्मिएको थिएँ तपाईं खुशीले मुस्कुराउनुभयो, जब मैले विवाह गरेँ तपाईं विलापका साथ रोइदिनुभयो र अब म तपाईंलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु कि म तपाईंलाई आफ्नो जीवनभन्दा बढी माया गर्छु।
मलाई थाहा छ कि बुबा बन्न सजिलो हुँदैन, मैले तपाईंलाई धेरै काम दिएँ, तर मेरा सबै झराहरूमा मैले तपाईंलाई हातहरू भेट्टाएको छु। धन्यवाद!
तपाईंको उपस्थितिले मलाई मेरा सपनाहरू पछ्याउनमा ममा आत्मविश्वास दिन्छ। आज र मेरो जीवनको प्रत्येक दिन मेरो साथमा भएकोमा धन्यवाद दिन्छु। पिता दिवसको शुभकामना!
एक बुबा गर्व गर्न को लागी एक हो, कसैले भन्न को लागी धन्यवाद, र सबै भन्दा, कुनै प्रेम गर्न। पिता दिवसको शुभकामना!
आफ्ना बच्चाहरूलाई बुबाको सबैभन्दा उत्तम सम्पदा भनेको प्रत्येक दिनको एक सानो समय हो।
बुबा हुनुभएकोले रोपेको छ र जरामा छ, यो जीवन को एक साथ हात सिकाउँदै छ, साहस र अठोट संग। पिता दिवसको शुभकामना।
सब भन्दा सुन्दर र आश्चर्यजनक सम्पदा जुन बुबाले आफ्नो छोरालाई छोड्न सक्दछन् त्यो चरित्रको गठन हो र यसपछिका चरणहरू देखाउनु हो। पिता दिवसको शुभकामना!
बुबा, तपाईं हुनुहुन्थ्यो, र सधैं मेरो राजकुमार मोहक हुनुहुनेछ। शुभ दिन!
अभिभावक एक त्यस्तो व्यक्ति हो जसले तपाईंलाई रोउँदा तपाईंलाई समर्थन गर्दछ, जसले नियमहरू भ break्ग गर्दा तपाईंलाई हप्काउँछ, जो तपाईं सफल भएकोमा घमण्डले चम्किन्छ, र तपाईंमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने पनि, जब तपाईं गर्नुहुन्न।
मेरो जीवनमा समस्याहरू छन्, तर ती मेरा पिताले मेरो जीवन सुरू गर्न सामना गर्नु भएको सामनाको तुलनामा केही होइनन्।
तपाईंलाई मनपर्नेहरू मध्ये एक छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईंले मनपराउनुहुन्छ र तिनीहरूलाई तपाईंको विशेष दिनको लागि तपाईंको बुबालाई समर्पण गर्नुहोस्!
लेखको पूर्ण मार्ग: स्वयं सहायता संसाधनहरू » पुनरावृत्त » वाक्यांशहरू » २ Father वाक्यांश फादर्स डेको लागि
१० वाक्यांश हजुरबा हजुरआमालाई समर्पण गर्न जुन तपाईंलाई उत्साहित पार्दछ
L० एक्लो वाक्यांशहरू जुन तपाईंलाई यससँग लड्न मद्दत गर्दछ